ကာရစ်ဘီယံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကာရစ်ဘီယံ (အင်္ဂလိပ်: Caribbean; /ˌkærɪˈbiːən/ (သို့) /kəˈrɪbiən/; စပိန်: Caribe; ဒတ်ချ်: Caraïben (ကူညီ·ချက်လက်); ပြင်သစ်: Caraïbe သို့မဟုတ် Antilles) သည် ကာရစ်ဘီယံ ပင်လယ်၊ ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်တွင်းရှိ ကျွန်းများနှင့် ဝန်းရံလျက်ရှိသော ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ ပါဝင်သည့် ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့နှင့် မြောက်အမေရိက ကုန်းမြေမကြီးတို့၏ အရှေ့တောင်ဘက်၊ ဗဟိုအမေရိက၏ အရှေ့ဘက်နှင့်၊ တောင်အမေရိက၏ မြောက်ဘက်တို့တွင် တည်ရှိသည်။
Cayman Islands (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း)
Puerto Rico (အမေရိကန် ဓနသဟာယ)
U.S. Virgin Islands (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု)
British Virgin Islands (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း)
Saint Martin (ပြင်သစ်)
Sint Maarten (နယ်သာလန် ဘုရင့်နိုင်ငံ)
တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Saba (ဘီအီးအက်စ်ကျွန်းများ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံ)
တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Sint Eustatius (ဘီအီးအက်စ်ကျွန်းများ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံ)
Saint Barthélemy (ပြင်သစ်အန်တီလီးစ်ကျွန်းစု၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ)
Guadeloupe (ပြင်သစ်အန်တီလီးစ်ကျွန်းစု၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ)
Martinique (ပြင်သစ်အန်တီလီးစ်ကျွန်းစု၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ)
Aruba (နယ်သာလန် ဘုရင့်နိုင်ငံ)
Curaçao (နယ်သာလန် ဘုရင့်နိုင်ငံ)
တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Bonaire (ဘီအီးအက်စ်ကျွန်းများ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံ)
↑ Country Comparison :: Population Archived 27 September 2011 at the Wayback Machine.. CIA. The World Factbook
↑ McWhorter၊ John H. (2005)။ Defining Creole။ Oxford University Press US။ p. 379။ ISBN 0-19-516670-1။
↑ "North America" Archived 21 October 2006 at the Wayback Machine. Atlas of Canada
↑ The World: Geographic Overview Archived5January 2010 at the Wayback Machine., The World Factbook, Central Intelligence Agency; "North America is commonly understood to include the island of Greenland, the isles of the Caribbean, and to extend south all the way to the Isthmus of Panama."
ဤ ပထဝီဝင် နှင့်သက်ဆိုင်သော ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကာရစ်ဘီယံ&oldid=726189" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။